कृष्णप्रसाद, मनमोहन, मदन र बीपीलाई पनि भ्रष्ट भन्दिने ?
- कुमार खड्का
अधिवेशनको प्रारम्भमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई व्यापक रूपमा उठाउनुभो । देशको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा त्यसैसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक पनि आएको छ ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र माननीय सदस्य ज्यूहरूको बहस सुन्दा भ्रष्टाचार, आर्थिक दुरूपयोग समस्या होइन, जो मान्छे थुनिए ती भ्रष्ट हुन्, जो थुनिएनन् भन्ने कोणमा हामीले बहस गरिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसका थुप्रै नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ ।
म बहुत साहस गरेर भन्छु कैयौँ त्यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ होला जो भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ तर जेल जानुभएको छैन । यसको अर्थ उहाँहरू इमान्दार हो भनेर व्याख्या गर्दै गयौँ भने हामी गलत बाटोमा जान्छौँ ।
कल्पना गरौँ न – नेता हुनुहुन्छ, जग्गा दलाल बन्नुहुन्छ । बालुवाटारको जग्गा बेच्नुहुन्छ । थुनिनुपर्छ भनेर नाबालिग छोराका नाममा दर्ता गर्नुहुन्छ । त्योभन्दा निकृष्ट काम के हुन्छ ? जेल गए जाला त्यो नाबालिग ! अनि त्यो जग्गा फिर्ता दिएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ ।
उहाँ दोषी हो, निर्दोष हो त्यो व्याख्या गर्ने काम अदालतको होला । तर, मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्न – उहाँ दोषी हो भने जग्गा फिर्ता गरेर कसरी उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ ?, यदी उहाँको रगत पसिनाले कमाएको सम्पत्ति राज्यले कसरी फिर्ता गर्न मिल्छ ?
ओम्नीको नाममा भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरै चर्चा गर्‍यौँ । आज ती मान्छेहरू जेलभन्दा बाहिर छन् । इमान्दार हुन् त ? यति होल्डिङ्समा, ७० करोडमा आर्थिक अनियमितता भयो । जेलमा छैनन्, ती इमान्दार हुन् त ? आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, उनका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने अनि हामीले ती मान्छे निर्दोष हुन्, इमान्दार हुन् भन्दै हिँड्ने कुराले कति अगाडि बढ्छौँ ?
विष्णु पौडेलजीले भ्रष्टाचार गरेको सावित भयो भने एमाले पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी भन्यो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन । थुप्रै कार्यकर्ताले रगत र पसिना दिएर बनाएको पार्टीको नेकपा एमाले । थुप्रै जनता, जनताका छोराले आहुती दिएर बनाएको पार्टी हो नेपाली काँग्रेस ।
मञ्चमा उभिएर एक जना व्यक्ति, दुई व्यक्ति, चार जना व्यक्तिले गरेका आर्थिक अनियमितताका कारणले एउटा इतिहास बोकेको पार्टीलाई भ्रष्ट पार्टी भन्दा के कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि तपाईं भ्रष्ट भन्ने ? तपाईं मनमोहन अधिकारीलाई पनि भ्रष्ट भन्ने ? तपाईंले मदन भण्डारीलाई पनि भ्रष्ट भन्ने ? बीपी कोइरालालाई पनि भ्रष्ट भन्ने ? कस्तो मार्गको अनुशरण गर्न लागिरहेका छौँ । तसर्थ अलिकति सार्थक बहस गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध ।
वाइडबडीमा सत्ता पक्षका मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर कसले भने ? वर्तमान मन्त्रीले भने, त्यही पार्टीका नेताले भने । सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई यी मान्छे भ्रष्टाचारी हुन्, यी मान्छेलाई कारबाही गर भन्यो ।
कारबाही आर्थिक अपराधको मात्रै होइन, स्वाब संकलन गर्ने कोरोनासँग सम्बन्धित मेडिकल सामानमा भ्रष्टाचार गरेकाले मानवता विरोधको अपराधमा कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कांग्रेस हुँदैनन्, एमाले हुँदैनन्, माओवादी हुँदैनन्, जनमोर्चा हुँदैनन् ।
कुनै पार्टीमा भ्रष्टाचारी छैनन् भन्यो भने त्यहाँ दुई कुरा हुन्छन् । एउटा कि झूटो बोलेको छ कि उसले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाएको छैन । तसर्थ, समस्या भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचारीलाई प्रहार गर्‍यौँ ।
सिँगो रूखमा एक/दुई वटा फल कुहियो भन्दैमा रूखलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति गलत छ । बीपी कोइराला दोषी ०१७ सालको काण्डमा महेन्द्र निर्दोष भन्ने अभिव्यक्ति हामीले केशवजंग रायमाझीबाट सुनिसकेका छौँ । माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट सुन्न पर्दैन ।
यो केशवजंग पथ क–कसले अँगाल्नुभएको छ आफूलाई उद्घोष गर्ने कुरा मात्रै हो । बीपी कोइरालालाई, पुष्पलाललाई, मनमोहन अधिकारीलाई, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई, मदन भण्डारी र सुशील कोइरालालाई रोल मोडल नमान्ने अनि गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोख्रेललाई रोल मोडल मान्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई सकरात्मक मार्गतिर लैजाँदैन ।
(कांग्रेसबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खड्काले २५ चैतदेखि सुरु विधेयक अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबारको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारको अंश । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २५ चैतमा कांग्रेसलाई भ्रष्टहरूको पार्टी भनेका थिए । सांसद खड्काले त्यसैको जवाफ शुक्रबारको बैठकमा फर्काएका हुन् ।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २७, २०७७, २१:१९:००